စိတ်နှင့်ဉာဏ် -၂ | Dr Chit Nge (Philosophy) Ph.D, London
ဂါ​ရ​၀ြ​ပု​တယ်ဆို​တာ .. .. →
Posted on April 25, 2011 by chitnge
သစ္စာဝါဒီများ .. ..
စိတ်နဲ့ဉာဏ်နဲ့ ကွဲပြားခြားနားချက်တွေတော့ တော်တော်လေးတော့ သဘောပေါက်လောက်ပြီလို့ ယူဆပါတယ်။ ဒီထက်ဒီ သဘောပေါက်ရင် ဒီထက်ဒီ ကောင်းလိမ့်မယ်။ ဥပမာ နိဗ္ဗာန်ကို စံဝင်တဲ့ အခါမှာ စိတ်မရှိဘူး။ ”ခန္ဓာနိရောဓော နိဗ္ဗာနံ” ဆိုတာ သိမှာပါ၊ ခန္ဓာမရှိဘူးပေါ့ ခန္ဓာမရှိဘူး ဆိုတော့ ရုပ်ခန္ဓာ နာမ်ခန္ဓာ မရှိဘူးဆိုတော့ နာမ်ခန္ဓာမရှိရင် စိတ်မရှိဘူးပေါ့။ ဒီတော့ စိတ်မရှိတော့ မသိတော့ ဘူးလား မေ့ဆေးပေးထားသလိုလား ဆိုတော့ ဒီလိုတော့ မဟုတ်ပါဘူး။
နိဗ္ဗာန်စံတာက (black hole) ထဲကို ကျရောက်သွားတာမျိုးလည်း မဟုတ်ပါဘူး။ နိဗ္ဗာန်စံတာက ဖိုလ်ဉာဏ်နဲ့ ဖလသမာပတ် ထိုးထွင်းတာပေါ့နော် .. .. ”မဂ္ဂဖလာန မာရမ္မနဘူတော အသင်္ခတ ဓမ္မော” ဆိုတဲ့ ပါဠိတော့ ရှိတယ်။ မဂ်ဉာဏ် ဖိုလ်ဉာဏ်နဲ့ အာရုံပြုရတာ နိဗ္ဗာန်ပဲ၊ ဒီတော့ နိဗ္ဗာန်ဆိုတာ ဖိုလ်ဉာဏ်နဲ့ အာရုံပြုတာပေါ့။ နားမလည်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေက သင်္ခတနဲ့ အသင်္ခတတောင် မကွဲတော့ နိဗ္ဗာန်ကို ချမ်းသာတဲ့စိတ်ကလေးလို့ တင်ပြကြတာဟာ တော်တော်ရှက်စရာလည်း ကောင်းပါတယ်။ ဗဟုသုတ မရှိဘဲနဲ့ စွတ်ရွတ်ပြီးတော့ တင်နေကြတာ ဟာသပဲ။
နိဗ္ဗာန်မှာ ရုပ်နာမ်မှ မရှိတာကိုး .. .. နိဗ္ဗာန်မှာ ဉာဏ်ပဲရှိတယ်။ ဖလသမာပတ်ဆိုတာ ရှိတယ် – ဖိုလ်ဉာဏ်နဲ့ နိဗ္ဗာန်ထိုးထွင်းတာပါ။ ဒီတော့ ဉာဏ်ကတော့ ကောင်းတာပေါ့နော် ရောင်ခြည်တော် ဆိုတာ ဉာဏ်က ထွက်တာပါပဲ။ အင်မတန်လည်း အံ့သြစရာကောင်းတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ အံ့သြစရာ ကောင်းတဲ့ ဂုဏ်ရည်တွေပါ။
ဒါကို ကွန်မြူနစ်တွေက ဗုဒ္ဓဘာသာကို ချေဖျက်ချင်တော့ နိဗ္ဗာန်အကြောင်းကို မပြောပါနဲ့ မဟောပါနဲ့ .. .. ဗုဒ္ဓဘာသာတို့ရဲ့ ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်က နိဗ္ဗာန်ပဲဥစ္စာ နိဗ္ဗာန်အကြောင်း မပြောလို့ ဘယ်ဖြစ်မှာတုန်း .. .. နိဗ္ဗာန်အကြောင်းကို သိရမှာပေါ့၊ ကိုယ်တိုင် မစံမြန်းနိုင်သေးဘူးဖြစ်စေ နိဗ္ဗာန်အကြောင်းတော့ အနုမာန မျက်ဆပြီး သဘောသဘာဝ သိထားရမှာပေါ့ .. .. နိဗ္ဗာန်ကို ဖိုလ်ဉာဏ်နဲ့ ထိုးထွင်းပြီးတော့ စံမြန်းတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီရုပ်နာမ်ဆိုတာ ပြောရရင်တော့ မကောင်းပါဘူး၊ အပျက်တရားပါ။ ကျွန်တော်တို့ဟာ ရုပ်နာမ်ကို မသိမ်းပိုက်သင့်ဘူး၊ ဉာဏ်ပညာပဲ တည်ဆောက်သင့်တယ်။ ဒါ လူသားအားလုံး ရုပ်နာမ်ရှိတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေအားလုံး လိုက်နာသင့်တဲ့ တရားပါ။ ဗုဒ္ဓဘာသာဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာတွေ အတွက်မှ မဟုတ်ပါဘူး။ ရုပ်နာမ်ရှိတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေ အားလုံးအတွက်ကို ကောင်းကျိုးဆောင်တဲ့ ဘာသာရပ်ပါ။ ဒါပေမယ့် မသိကြဘူးပေါ့လေ။
ဒီတော့ နိဗ္ဗာန်မှာ ရုပ်နာမ်မရှိပဲ ဉာဏ်ပညာတွေနဲ့ သက်ရောက် စံမြန်းကြတာ အံ့သြဖွယ်ရလည်း ကောင်းတယ်။ နိဗ္ဗာန်ရဲ့ ဂုဏ်ရည်တွေလည်း အများကြီးပဲ ကျွန်တော် မကြာခဏပြောပါတယ်။ မြန်မာလိုကတော့ ချမ်းသာခြင်းမျိုးစုံ စုပုံတယ်၊ လွတ်မြောက်တဲ့ အရသာရှိတယ်၊ သိမ်မွေ့နုညံ့တယ်၊ အသိခက်တယ်၊ နက်ရှိုင်းတယ်၊ (၃၁)ဘုံမှာ နှိုင်းခိုင်းစရာ ဥပမာ မရှိဘူး၊ အံ့သြဖွယ်ရာ ကောင်းတယ် ဒါတွေဟာ နိဗ္ဗာန်ရဲ့ ဂုဏ်ရည်တွေပါ။ ခိုင်မာစေချင်ရင်လည်း ပါဠိလိုကတော့ နိစ္စ၊ ဓူဝ၊ နိပုဏ၊ အနိဒဿန၊ အစ္စရိယ၊ အမ္ဘူတ၊ ၀ိဝေက၊ သုညတ၊ အနိမိတ္တ ဆိုတာ ရှိတာပေါ့။
ဒီတော့ နိဗ္ဗာန်မှာ ဂုဏ်ရည်တွေရှိတယ်၊ ဂုဏ်ရည်တွေ ရှိတာကို ဖိုလ်ဉာဏ်နဲ့ ထိုးထွင်းပြီး သိရတယ်။ သိတဲ့ အရိယာတွေက အခါအားလျော်စွာ ပြန်ပြောပြရင်းနဲ့ နိဗ္ဗာန်အကြောင်းကို အနုမာန မျက်းမှန်းဆ ကြတာပါ။ တကယ်စံမြန်းတဲ့ အခါကျတော့လည်း ဉာဏ်နဲ့ပဲ စံမြန်းပြီးတော့ မစံမြန်းနိုင်သေးခင်မှာတော့ မျက်မှန်းဆရတဲ့ သဘောပါပဲ။ ဒီတော့ ဉာဏ်ပညာအကြောင်း လေ့လာတာ အန်မတန် ကောင်းပါတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ အကျိုးရှိမယ်ဆိုရင် ပြောဖို့အတွက် ၀န်မလေးပါဘူး၊ ပြောပေးနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ လူငယ်တွေ အကျိုးရှိရာ ရှိကြောင်း ကြိုဆိုတယ်၊ သာဓုလည်းခေါ်တယ်၊ သဘောလည်းကျတယ်။
တစ်ချို့ကတော့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် အကျိုးရှိအောင် မလုပ်ကြဘူး၊ ဒါကတော့ လူငယ်တွေ ဘာဖြစ်ကြတာလည်း မသိဘူး၊ လူငယ်တွေဖြစ်ပြီး တိုးတက်အောင် ကြိုးစားဖို့ ကောင်းတာပေါ့။ ကျွန်တော်တို့လည်း ငယ်ရွယ်တုန်းက ကြိုးစားခဲ့လို့ အခုချိန်မှာ အသိပညာ အထိုက်အလျောက် ရရှိနေတယ် ပြန်ပြောနိုင်တာပေါ့။ ငယ်တုန်းရွယ်တုန်းဆိုတာ အကျိုးရှိရာရှိကြောင်း လိုက်ရမှာပေါ့။
ဥပမာဆိုကြပါစို့ .. .. ဥပမာပြောတာပါ – ကျွန်တော့်ကို တစ်ချို့က တိုက်တယ်ပေါ့၊ ဒါလည်း ကျွန်တော် နားလည်ပါတယ်။ တစ်ချို့ကလည်း ကျွန်တော့်ကို ဒုက္ခဖြစ်အောင် လိုက်လုပ်တယ်၊ အဲဒါကျတော့လည်း သူတို့က နှလုံးသွင်း မှားနေတာပေါ့နော်။ သူတို့ကို ဘယ်သူတွေကများ မောင်းနှင်ပေးနေလည်းတော့ မသိဘူးပေါ့နော် .. .. ဘာဖြစ်လို့ စိတ်ထားယုတ်ညံ့တာတွေကို မွေးနေတာလည်း – အံသြဖွယ်ရာ ကောင်းတယ်။ လူငယ်ဆိုတာ တက်တက်ကြွကြွနဲ့ အကျိုးရှိရာ ရှိကြောင်းကို လေ့လာ – ကိုယ်သိချင်တာလေး တွေကို လေလာရင် အင်မတန် အဖိုးတန်တဲ့ လူသား ဖြစ်နိုင်ရဲ့သားနဲ့ အသိပညာ အမြော်အမြင်လည်း ရှိရဲ့သားနဲ့ အကုသိုလ်တွေ လုပ်ပြီးတော့ စိတ်ထားတွေ မှားနေတယ်။
ကျွန်တော့ကို ဒုက္ခဖြစ်စေချင်တဲ့ ရည်မှန်းချက်တွေနဲ့ လုပ်နေကြတာ အံ့သြတယ်။ ကျွန်တော်ပြောမယ်၊ ကျွန်တော်ကို သူတို့ ဒုက္ခဖြစ်အောင်လုပ်လို့ ကျွန်တော် ဒုက္ခမဖြစ်ဘူး။ ကျွန်တော် ဒုက္ခဖြစ်အောင်က ကျွန်တော့ကိုယ် ကျွန်တော်လုပ်မှ ဖြစ်မှာ .. .. ကျွန်တော်ကလည်း ကိုယ့်ကိုကိုယ် ဒုက္ခဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့ လူစားမျိုး မဟုတ်တော့ဘူးဆိုတော့ ကျွန်တော်ဟာ ဒုက္ခဖြစ်ဖို့ မရှိဘူး။ ကြွင်းကျန်နေတဲ့ ဒုက္ခတော့ ဒီလိုပဲ တရားနဲ့ ဆင်ခြင်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီလိုပဲ တစ်ဖက်ကတော့လည်း အသိပညာ သိချင် တတ်ချင်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေကို ကျွန်တော် ပြောပြချင်ပါ တယ်။ ကျွန်တော် အမြွက်လောက်ပဲ ပြောနေတာ ကျွန်တော့ကို နားလည်ပေးပါ။ ကျွန်တော့်ကို တအား တိုက်ကြတာပဲ ကျွန်တော်သိသမျှ တစ်ဝက်လောက်ပြောတာကို သူတို့က တအားလွန်နေတယ် ထင်နေတော့ ကျွန်တော် ဆင်ခြင်ပြောတာပါ၊ ကျွန်တော်က ဒီထက်လည်း သိပါတယ်။
ကျွန်တော်က ဉာဏ်ပိုင်ရှိင်ပဲ ဉာဏ်အကြောင်းကို သိပါတယ်။ ဆက်လေ့လာပါ ဆက်ပြောနိုင်ပါတယ်၊ ဉာဏ်အကြောင်းပြောလို့ကတော့ အံ့သြဖွယ်ရာကောင်းတာပေါ့။ ဉာဏ်ဆိုတာ လောကုတ္တရာနဲ့ ပတ်သက်တာပဲ “န၀လောကုတ္တရ ဓမ္မေ” ဆိုတာ ရှိတယ်လေ။ လောကုတ္တရာကိုးပါးမှာ မဂ်ဉာဏ် ဖိုလ်ဉာဏ် နိဗ္ဗာန် ဒါတွေက လောကုတ္တရာတွေပဲ။ ဒီတော့ ဉာဏ်နဲ့စိတ်ကို ခွဲခြားပြီး သဘောပေါက်ပါ။ ကိုယ်လည်း ၀င်စားပါ ဆက်ပြီးပြောပြ ရေးပြပါမယ်။
ဉာဏ်ဆိုတာက စိတ်ကိုနိုင်တယ်။ ရုပ်ထက် စိတ်ကမြန်တယ်၊ စိတ်ထက် ဉာဏ်ကမြန်တယ်ပေါ့ ဒီလိုပြောရင် ရတယ်။ ရုပ်ဟာ တစ်စက္ကန့်မှာ ကီလိုသုံးသိန်းလောက် သွားတယ်ပေါ့နော် – စိတ်ဟာ အဲဒီထက်မြန်တယ် (၁၇)ဆ လောက်မြန်တယ်၊ ဉာဏ်ကတော့ အဲဒီထက်ကို ပိုပို ပိုပို မြန်တာပေါ့ .. .. ဉာဏ်ပိုင်ရှင်ဖြစ်ရင်တော့ လောကကြီးမှာ ပြီးတာပဲ။ ဉာဏ်ဟာ အထွတ်အမြတ် အကောင်းဆုံးပါပဲ။ ဉာဏ်ပညာကို ဆက်လက်ပြီး ၀င်စားပါ – ဆက်လက် ကူညီဖြည့်စွက်ပြီး ဒီက ဖြန့်ဝေပေးဖို့ ရှိပါသေးတယ်။ နောက်ကြုံဦးမှာပါ .. ..
၀မ်းသာပါတယ် .. ..
Tags: Buddhism, Myanmar Posts, ကွန်မြူနစ်, စိတ်, နိဗ္ဗာန်, မဂ်ဉာဏ်၊ ဖိုလ်ဉာဏ်, လောကုတ္တရာ
This entry was posted in Buddhism and tagged Buddhism, Myanmar Posts, ကွန်မြူနစ်, စိတ်, နိဗ္ဗာန်, မဂ်ဉာဏ်၊ ဖိုလ်ဉာဏ်, လောကုတ္တရာ. Bookmark the permalink.
One Response to စိတ်နှင့်ဉာဏ် -၂